Usefinyelele nasemazweni aphesheya ngethalente lemfashini
UNKSZ Precious Mahlangu nababili abamodelayo ngemuva begqoke izimpahla ezinziwe nguye komunye wemibukiso yemfashini Isithombe: SITHUNYELWE
Nonhlanhla Mbonambi | April 30, 2022
OBENOTHANDO lwemfashini kusukela esakhula, useyaziwa nasemazweni aphesheya ngengqephu emva kokusungula nenkampani yakhe yemfashini, iPrecious Lulu Couture.
UNksz Precious Mahlangu, uthe bekwiyinto eyaziwayo nasekhaya kubo ukuthi uyazithandela indwangu. Uyise waze wamthengela nomshini wokuthunga ngoba ebona ithalente analo esafunda amabanga aphansi, ukuze aqale azifundise ukuthunga.
“Ayikho enye into engangifisa ukuyenza ngempilo yami ngaphandle kwemfashini ngoba ngangihlezi nginentshisekelo ngezamaciko. Ngithe uma ngiqeda isikole ngafundela imfashini eVaal University of Technology,” kusho uNksz Mahlangu.
Uthe ngenxa yokungabi bikho kwamathuba emisebenzi wabona ukuthi asebenzise ithalente analo, waziqalela inkampani yakhe ngo-2008 kodwa ize yabhaliswa ngokusemthethweni ngo-2015.
“Ngangenela umncintiswano ngo-2018 ohlelweni iRaw Skills olwalukhonjiswa kwiSABC-1 ngingomunye wabasiki bemfashini. Lwanginikeza inkundla enkulu, ngakwazi ukuzibonakalisa, ngazimaketha ezweni lonke. Ngaba womunye wabathathu abaphuma phambili,” kusho uNksz Mahlangu.
Uthe noma engasitholanga isicoco, kodwa wakuthola ayekuzele.
“Ngaklonyeliswa ngenkontileka yokuthengisa izingubo engizithungela izitolo ezinkulu, okubalwa kuzo iFoschini. Ngaqala ngahambela namazwe okubalawa kuwo iLondon, Dubia naseSeychelles ukubonisa imfashini yami,” kusho uNksz Mahlangu.
Uthe lokhu kwamsiza ukuthi athuthuke ekubeni ngumski wengqephu, kwamvulela namathuba amaningi ukudlondlobalisa ibhizinisi lakhe.
“Ngifuna ukuba yisibonelo nakwabanye ukuthi amaphupho ayefezeka kubantu basemakhaya nasemalokishini, ikakhulukazi njengoba ngingowaseSikhaleni. Ngifuna intsha yangakithi ibukele kimi,” kusho uNksz Mahlangu.
Uthe kubalulekile ukuthi nasezikoleni ingashawa indiva indaba yokuthunga ngoba abafundi abanethalente lakho bangalisebenzisa ukuthi baphumelele empilweni futhi bazakhele bona amathuba emisebenzi.
“Ukwakha amathuba emisebenzi akusikhona kuphela engifisa ukukwenza, kodwa ngifuna ukuthi ngithuthukise nekhono entsheni efuna ukungena kulo mkhakha ukuze izakhele owayo umcebo,” kusho uNksz Mahlangu.
Uthe akuhlosile kakhulu wukuthi izingubo zakhe zifinyelele emazweni ahlukene, abe wumsiki wengqephu owaziwayo futhi ohlonishwayo emhlabeni wonke.